महिनावाना बौद्धको तीन शुद्ध सिद्धान्तहरू
तीन शुद्ध सिद्धान्तहरू
बौद्ध नैतिकताको एक फाउन्डेसन
तीन पवित्र सिद्धान्तहरू, कहिलेकाहिँ तीनवटा रूट तयारीहरू छन्, केही महिमा विद्यालयहरूमा अभ्यास गरिन्छ। तिनीहरू सबै बौद्ध नैतिकताको आधार भनिएको छ।
तीन शुद्ध सिद्धान्तहरू हँसिलो सरल देखिन्छन। एक साधारण अनुवाद हो:
कुनै दुष्ट गर्नको लागि;
यद्यपि तिनीहरू सरल लाग्छन्, तीन शुद्ध सिद्धान्तहरू गहिरो महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यो भनिएको छ कि उनि लेखिएको छ कि एक तीन वर्षीय बच्चाले तिनीहरूलाई बुझ्न सक्छ, तर अस्सी वर्षको व्यक्तिले उनीहरूको अभ्यास गर्न संघर्ष गर्न सक्छ।
जेन शिक्षक टिन्सेन रब एन्डर्ससन, रोशीले भने, "तिनीहरू प्रबुद्ध दिमागको संरचना र मौलिक डिजाइनको वर्णन गर्दछ।"
तीन शुद्ध सिद्धान्तहरूको उत्पत्ति
तीन शुद्ध सिद्धान्तहरू यस पदको साथ धम्मपादाबाट [अङ्ग्रेजी 183, आचार्य बुद्धारख्खा अनुवाद):
सबै दुष्टबाट बच्न, राम्रो खेती गर्न र एक मनलाई शुद्ध गर्न - यो बौद्धको शिक्षा हो।
महायण बौद्ध धर्ममा, अन्तिम रेखालाई ज्योति प्रवाह ल्याउन बोद्स्टावाको वाह प्रतिबिंबित गर्न संशोधित गरियो।
त्यहाँ यी सिद्धान्तहरूको धेरै भिन्नताहरू छन्। उनको पुस्तक द द द द द द द: द सन र ईथिकल सिक्योरिटीज जेन बौद्ध धर्म , जॉन डेडो लो लोरी, रोशीले यस्तो लेखे:
खराब सिर्जना नगर्नुहोस्
राम्रो व्यवहार गर्दै
अरूको लागि राम्रो व्यवहार गर्दै
जेन शिक्षक योशु पट्टानले यो संस्करण प्रदान गर्दछ:
म संलग्नक सिर्जना गर्नुभएका सबै क्रियाकलापहरू रोक्न वाँच्न सक्छु।
मैले प्रकाशमा जीवन बिताउने प्रयास गर्ने प्रतिज्ञा गरें।
म सबै प्राणलाई फाइदा लिन बाँच्न सक्दिन।
स्यान फ्रान्सिस्को जेन सेन्टरको संस्थापक शुन्री सुजुकी रोशीले यो अनुवाद मनपरायो:
हृदयको शुद्धता संग, मैले अज्ञानताबाट बचाउन सकें।
हृदयको शुद्धताको साथमा, मैले शुरुवातको मन प्रकट गरें।
हृदयको शुद्धता संग, म जीवन्त जीवन बिताउन चाहन्छु, र बाँच्न चाहन्छु, सबै प्राणीहरूको लाभको लागि।
यी अनुवादहरू धेरै फरक लाग्न सक्छ, तर यदि हामीले प्रत्येक प्रस्तावलाई हेरौं भने हामी देख्छौं कि तिनीहरू धेरै टाढा छैनन्।
पहिलो शुद्ध प्राथमिकता: कुनै ईश्वर गर्न को लागी
बौद्धमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि एक बल को रूप मा बुराई को बारे मा सोचने को लागी गल्ती को कारण या कुनै गुण हो कि केहि मान्छे को हो। बरु, दुष्ट हामी केहि चीज हो जुन हाम्रो विचार, शब्दहरू वा कार्यहरू तीन रूट विषाणुहरू - लोभ, रिस, अज्ञानता द्वारा परिस्थित हुन्छ।
खैरो, क्रोध र अज्ञानता जीवनको व्हीलको केन्द्रमा एक मुर्गा, सांप र एक सुँगुरको रूपमा चित्रण गरिएको छ। तीन जना बिरामीहरू एससमारा मोरङको पहिया राख्न र विश्वमा सबै दुखाइ ( डुकखा ) को लागी जिम्मेवार छन्। केही दृष्टान्तहरूमा सुँगुर, अज्ञानता, अन्य दुई प्राणीहरूको नेतृत्व देखाइएको छ। यो अस्तित्वको प्रकृतिको हाम्रो अज्ञान हो, हाम्रो आफ्नै अस्तित्वमा, जुन लोभ र रिस उठाउँदछ।
अज्ञानता पनि संलग्नको मूलमा छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि करीबी, व्यक्तिगत सम्बन्धको सम्बन्धमा बौद्ध धर्मको संलग्नताको विरोध छैन। बौद्ध अर्थमा अनुलग्नक दुई चीजहरू चाहिन्छ - संलग्नक, र जुन संलग्नक संलग्न भएको कुरा। अन्य शब्दहरूमा, "अनुलग्नक" लाई आत्म-सन्दर्भ चाहिन्छ, र यसले आफैले अलगको रूपमा अनुलग्नकको वस्तुलाई हेर्न आवश्यक छ।
तर बौद्धले हामीलाई यो सिकाउँछ एक भ्रम हो।
त्यसोभए, दुष्ट बनाउन नसक्नु , क्रियाकलाप सिर्जना गर्ने क्रियाकलापलाई खारेज गर्न, र अज्ञानताबाट अलग रहन पनि एकै ज्ञानलाई इंगित गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। " बौद्ध र ईश्वर " पनि हेर्नुहोस्।
यस बिन्दुमा, तपाईं आश्चर्य गर्न सक्नु हुन्छ कि कसैले कसरी व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नु अघि वा उनीहरूलाई ज्योतिलाई थाह छ। डिप्डो रशीले भने, "'राम्रो व्यवहार गर्ने' एक नैतिक निषेध होइन तर यसको सट्टामा नै होईन।" यो बिन्दु बुझ्न वा व्याख्या गर्न एकदम गाह्रो छ, तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामी सोच्न सक्छौं कि हामी प्रबुद्धता प्राप्त गर्न अभ्यास गर्छौं, तर अध्यापकहरूले हामी स्पष्ट व्यक्तित्वलाई व्यवहार गर्छौं।
दोस्रो शुद्ध प्राथमिकता: राम्रो गर्न को लागी
Kusala पाली ग्रंथहरूबाट शब्द हो जुन अंग्रेजीमा "राम्रो" रूपमा अनुवाद गरिएको छ। Kusala पनि "कुशल।" यसको विपरीत अकुलला छ , "अकुशल", जसले अनुवाद "दुष्ट" भनिन्छ। "राम्रो" र "खराब" बुझ्न मदतकारी हुन सक्छ "कुशल" र "अकुशल" को रूपमा, किनभने यसले जोड दिन्छ कि असल र खराब पदार्थ वा गुणहरू होइनन्।
डेडोलो रोशीले भने, "नराम्रो नै अवस्थित छ न त अवस्थित छैन। यो मात्र अभ्यास हुन्छ।"
जहिले पनि दुष्टले प्रकट गर्छ जब हाम्रो विचारहरू, शब्दहरू र कार्यहरू तीन विषाणुहरूद्वारा परिस्थित हुन्छन्, असल कुराले गर्दा हाम्रो विचारहरू, शब्दहरू र कार्यहरू तीन विषहरू मुक्त हुन्छन्। यसले हामीलाई ढोम्पाडाबाट मूल पदमा लिन्छ, जसले हामीलाई शुद्ध गर्न वा शुद्ध गर्न दिमागलाई बताउँछ।
Tenshin Roshi ले भन्यो "दिमाग शुद्ध" एक "दयालु र कोमल प्रोत्साहन हो जुन सबै दुर्व्यवहार, स्वार्थी प्रेरणाबाट तपाईंको दुष्टताबाट परिष्कृत र राम्रो अभ्यास गरौं।" बुद्धले सिकाउँदा यस्तो दयाले ज्ञानको आह्वानमा निर्भर गर्दछ - विशेषगरि, हाम्रो पृथक, स्थायी "आत्म" भ्रम हो - बुद्धि र बुद्धिले पनि दयापूर्वक निर्भर गर्दछ। यस बिन्दुमा थपको लागि, कृपया " बौद्ध र दयालु " हेर्नुहोस्।
तेस्रो शुद्ध प्राथमिकता: सबै चीजहरू सुरक्षित गर्न
Bodhichitta - सबै प्राणीहरूका लागि प्रबुद्धता महसुस गर्न दयालु इच्छा, मात्र होइन स्वयं - महिनावाना बौद्ध धर्मको हृदयमा छ। Bodhichitta को माध्यम ले, ज्योति प्राप्त गर्न को इच्छा व्यक्तिगत व्यक्ति को संकीर्ण हितहरुलाई पारित गर्दछ।
Tenshin Roshi भन्छन् कि तेस्रो शुद्ध प्रक्र पहिले पहिलो दुई को प्राकृतिक पूर्ति हो: "निस्सन्देह मुक्तिको राम्रो अनुहारमा अवशोषण प्रायः सबै प्राणीहरू पोषण गर्न र परिपक्व हुन मद्दत गर्दछ।" 18 औं शताब्दीको प्रारम्भिक जेन हुक्नु जेनजीले यसलाई यस्तो तरिकाले राखे: "निर्दोषताको समुद्रबाट, तपाईंको महान अनगिन्ती दयालुले चमक दिन्छ।"
यो अनुमोदन धेरै तरिकामा व्यक्त गरिएको छ - "सबै प्राणीहरू गम्भीर र स्थिर"; "अरूको लागि राम्रो बनाउने"; "सबै प्राणीहरूलाई फाइदा लिन"; "सबै प्राणीहरूको फाइदाको लागि बाँच्नुहोस्।" अन्तिम अभिव्यक्ति अस्थिरताको कुरा हो - मुक्ति दिमाग स्वाभाविक रूपमा र असामान्य रूपले लाभदायक वृद्धि दिन्छ।
स्वार्थी, अज्ञानता, संलग्न मनले यसको विपरीत वृद्धि गर्छ।
13 औं शताब्दीको मास्टरले डोगेन जेन्जे जापानलाई सटो जेन ल्याए, "बताए, बिना नैतिकता र कुनै नैतिकता बिना रोशन छैन।" बौद्धको सबै नैतिक शिक्षाहरू तीन शुद्ध सिद्धान्तहरू द्वारा समझाईएको छ।
ताओ ते चिंग - पद 42
Enuma Elish: सबैभन्दा पुरानो लिखित सिर्जना मिथक
दाहिने दृश्य-बौद्ध आठोल्ड पथ
क्वार्ट्ज र सिलिका खनिज ग्यालरी
लंदन को दिलचस्प भूगोल
'आराध' र 'मौखिक' बीचको भिन्नता के हो?
प्रहरी प्रविधि र फोरेंसिक विज्ञान
रहस्य स्कूलहरूमा के सिकाइन्छ?
कुन पेंसिल म शिरिङको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ?
तापक्रममा तापक्रमको तापक्रम कसरी तापमान हुन्छ?
चीनियाँ नयाँ वर्ष लालटेन इच्छाहरु
15 सर्वश्रेष्ठ वेरावोल्फ डरावरे फिल्महरू
रासायनिक प्रतिक्रियाहरू कति प्रकारका छन्?
'80s को शीर्ष सुपरसमूह
बौद्ध धर्मको बारेमा कसरी सिक्न
गल्फमा फिड (वा 'फीड शॉट') के हो?
2018 मा खरीद गर्न 11 सर्वश्रेष्ठ बाइक रोशनी, रिफ्लेक्टर र सुरक्षा परिधान
रोमी क्याथोलिकहरू कारण हरेक आइतबार मास जान्छन्
बच्चा आविष्कारहरू - विद्यालयको लागि आविष्कार
एशियामा कालो मृत्यु कसरी भयो
बम्बलबेस, जेनिस बोमस
किन आगो हटाइन्छ? यो कति गर्म छ?
लन रखरखाव: घाँस को वैकल्पिक
साधारण नृत्य चोटहरू
कांगो गणतन्त्रको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कांगो (जारे)
महाविद्यालय बनाम कन्वर्वरेटरहरू